Midowga Yurub oo joojiyey socdaalka muwaadiniinta Maraykanka & Shiinaha
June 30, 2020 Mahad Jama 0
LONDON(P-TIMES)- Midowga Yurub ayaa shaaca ka qaaday 14 dal oo muwadiniintooda loo arko inay badqabaaan kuwaas oo loo ogolaan doono inay qaaradaas booqdan wixii ka bilawdo kowda Luulyo, iyadoo uu jiro cudurka Coronavirus.
Dalalka Maraykanka, Brazil iyo Shiinaha ayaa kamid ah dalalka laga mamnuucay inay booqdaan Yurub.
Dalalka la ogolaaday ayaa waxaa kamid ah Australia, Canada, Japan, Morocco iyo Kuuriyadda Koonfureed.
Midowga Yurub ayaa waxa uu sheegay inay diyaar u yihiin in Shiinaha ay ku daraan liiska hadii Shiinaha ay heshiis kaas la mid ah ay u ogolaadan dadka Yurub diblumaasiyiinta ayaa sidaasi sheegay.
Waxaa xuduudaha la isugu furay muwadiniinta Yurub ku nool ee safarada isaga dhex gooshaya, waxaase si gooni ah loola macaamiilaa muwadiniinta UK kadib markii dalkaasi uu ka baxay midowga Yurub.
Liiska wadamada badqaba ayaa la filayaa in dib u habayn lagu sameeyo sida dalalka Algeria, Australia, Canada, Georgia, Japan, Montenegro, Morocco, New Zealand, Rwanda, Serbia, Kuuriyada Koonfureed, Thailand, Tunisia iyo Uruguay.
Dowladda Uk ayaa ku jirta wada xaajood ku aadan waxaa loogu yeedhay buundooyinka hawada oo ay la leedahay wadamo ka tirsan midowga Yurub si aan Fayraska Corona u horjoogsan fasaxa xagaaga oo ah ka ugu mashquulsan Yurub isla markaana ay malaayin qof ka helaan shaqo.
Midowga Yurub ayaa isku dubaridaya hab raaca lagu maraynayo nidaamkan oo lagu go’aaminayo wadamada badqaba iyo kuwa aan badqabin.
Salaasadan ayaa la filayaa go’aanka 55% wadamada Yurub ay saxeexaan liiska oo matala 65% dadka midowga ku nool, iyadoo ay jirto kala qaybsanaan wadamada qaar ayaa qaba Spain in la xoojiyo dalxiiska oo hada raba inay digtoonaadaan waayo Covid 19 ayaa aad u sameeyey iyo wadamada Giriiga iyo Portugal oo iyagu ku tiirsan dalxiiska laakiin aan cabsi weyn ka qabin fayraska.